I-china ipulasitiki epulasitiki ifektri kanye nabaphakeli | I-Jixiang
Ingqimba engaphezulu kwepuleti elimibalabala le-aluminium-plastic isebenzisa ＞ 70% i-fluorocarbon izinto ezintathu zokumboza njengezinto eziyisisekelo, futhi ingeza i-Pearlescent Mica nezinye izinto ezintsha. Inombala omuhle futhi othambile njengensimbi. Kwenza ukusetshenziswa okuphelele kokuhlangana kokukhombisa, ukukhipha, ukukhipha, ukumunca phakathi kokukhanya nezinto ezibonakalayo ukwakha umbala omuhle wemvelo, ukuze wakhe umuzwa wokubuka wobuso entantayo.
1. Umbala ongaphezulu uyashintsha ngokushintsha komthombo wokukhanya ne-engeli yokubuka;
2. Isicwebezelisi sendawo ephezulu, ngaphezu kuka-85%;
Kufanelekile ukuhlobisa kwasendlini nangaphandle kwezindawo zomphakathi, uchungechunge lwezohwebo, ukukhangisa kombukiso, imoto yezitolo 4S shop, njll.
Langaphambilini Nano self yokuhlanza aluminium ipuleti lepulasitiki